Global Voices teny Malagasy » Ny fotoana nanaovan’ny mpanatontosa sarimihetsika Ultraman Japoney ny fandevenana ireo bibidiany · Global Voices teny Malagasy » Print
Ny fotoana nanaovan'ny mpanatontosa sarimihetsika Ultraman Japoney ny fandevenana ireo bibidiany
Voadika ny 05 Jolay 2018 5:10 GMT 1	 · Mpanoratra Nevin Thompson Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Hevitra, Mediam-bahoaka, Sarimihetsika, Vaovao Tsara, Zavakanto & Kolontsaina
Ireo andiana kilalao bibidia ‘Ultra Heroes’ Bandai. Mifototra avy amin'ny tantara nosoratan'i Tsuburaya ‘Ultraman’ izy rehetra ireo. Saripikan'i Nevin Thompson.
Namoaka ireo andian-tsary tany amin'ny 45 taona lasa izay nahitana ny fandevenana ofisialy ho an'ireo bibidian'ny sarimihetsika “kaiju ” niady tamin'i Ultraman, ilay maherifo nikoizana malaza indrindra any Japana ilay mpisera Twitter mavitrika Mulboyne .
Ny fanomanana ny fandoroana ny fatin'ny kaiju tao Jingu Gaien tamin'ny taona 1973
Mamoaka lahatsoratra matetika momba an'i Japana ao amin'ny Twitter  i Mulboyne, mitatitra ny zava-drehetra toy ny sushi tsy dia malaza firy  izay amidy any amin'ny fivarotan-dehibe Japoney ka hatrany amin'ny vali-pikarohana sary tsara indrindra mitady ny “gaijin”  (“vahiny”, amin'ny teny Japoney) ary ny fironana amin'ny fiovana endriky ny mariky ny orinasa . 
Ao anatin'ity tranga ity, mamahana bilaogy fohy momba an'i Ultraman  i Mulboyne, tranga ara-kolontsaina mitovy amin'ny fomba maro amin'ny andian-tantara am-pahitalavitra Britanika Dr. Who . Tahaka an'i Dr. Who dia efa ho 50 taona teo ho eo no nisian'ny andian-tantara Ultraman , miaraka amin'ny andian-tantara maromaro mitranga amin'ny fotoana sy tontolo maro isankarazany.
Nandritra ny taona maro, nahatonga ny fiakaram-barotra nikoizana tsy ankiato ka nahalafosana karazana modelin'i Ultraman ampolony maro sy ireo bibidia izay tsy maintsy noreseny ny andian-tantara sy ireo sarimihetsika samihafa momba an'i Ultraman tamin'ny fahitalavitra .
Ny Tsuburaya Productions  no namorona ny andian-tantara, trano famokarana (effets spéciaux) Japoney naorin'i Eiji Tsuburaya  tamin'ny taona 1963 ary notantanan'ny fianakaviany mandra-pahatongan'ny volana Oktobra 2007.
Na izany aza, tany am-piandohan'ny taompolo 1970, somary nandalo fotoan-tsarotra ny sarimihetsika Ultraman, ary nisy ny fanovana izay tsy maintsy natao. Nanazava i Mulboyne  :
Ny andiana tranga mampalahelo tao amin'ny Tsuburaya Productions no fototra niavian'ity raharaha ity. Maty tamin'ny taona 1970 i Eiji Tsuburaya, mpanorina, ary nodimbiasan'ny zanany lahy, Hajime izy. Maty tampoka tamin'ny taona 1973 i Hajime. Maro ihany koa ny loza nitranga nandritra ny fanatontosana ny horonantsary.
Nanapa-kevitra ny hanatontosa ny hetsika fahatsiarovana ho an'ireo mpilalao kaiju maty tao amin'ny fampisehoan'ny fahitalavitra ny orinasa. Natao ihany koa izany mba ho toy ny 厄 払 い (yakubarai – lanonana fanadiovana) mba hamaranana ny andiana vintan-dratsy.
Tahaka ireo fomba fanao Tandrefana  sasany, fomba fanao malaza mahazatra indrindra  ao Japana amin'ny fisorohana na fanalana ny vintan-dratsy na ihany koa ny hoe handroahana ny fanahy ratsy  ny yakubarai. Tao anatin'ity hetsika ity, naniry ny hanomboka zava-baovao indray ny Tsuburaya Productions, ary nodorana noho izany ireo fanamian'ny bibidia maromaro izay nandrafitra ny lazan'i Ultraman.
Nanatrika ny lanonana ireo maherifo izay nandresy ireo bibidia
Natao tao amin'ny Kianjan'ny Fialamboly Futako-Tamagawaen ny lanonana, nitondra ny sarin'ireo kaiju izay efa resy sy maty nandritra ny fampisehoana ireo mpilalao sarimihetsika.
Nahasarika mpijery manodidina ny 2.000 ny lanonana.
Manana sary sy antsipiriany bebe kokoa momba ny lanonana (amin'ny teny Japoney) ity tranonkala ity . Hanomboka hiseho amin'ny fahitalavitra Japoney ny volana Jolay 2018  ny andian-tantara manaraka  amin'ny tantaran'ny Ultraman.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/07/05/121802/
 June 5, 2018: https://twitter.com/Mulboyne/status/1003908431344877568?ref_src=twsrc%5Etfw
 lahatsoratra matetika momba an'i Japana ao amin'ny Twitter: https://globalvoices.org/2018/02/17/a-fascinating-glimpse-into-the-life-of-a-popular-chimpanzee-in-pre-war-japan/
 sushi tsy dia malaza firy: https://twitter.com/Mulboyne/status/959954189613916160
 vali-pikarohana sary tsara indrindra mitady ny “gaijin”: https://twitter.com/Mulboyne/status/958572433103081474
 fironana amin'ny fiovana endriky ny mariky ny orinasa .: https://twitter.com/Mulboyne/status/960456673444880384
 Dr. Who: https://en.wikipedia.org/wiki/Doctor_Who
 Tsuburaya Productions: https://en.wikipedia.org/wiki/Tsuburaya_Productions
 Eiji Tsuburaya: https://en.wikipedia.org/wiki/Eiji_Tsuburaya
 Nanazava i Mulboyne: https://twitter.com/Mulboyne/status/1003909788437057536
 fomba fanao Tandrefana: https://en.wikipedia.org/wiki/Apotropaic_magic
 fomba fanao malaza mahazatra indrindra: http://jpninfo.com/43762
 handroahana ny fanahy ratsy: http://otakucalendarjapan.com/?p=23476
 June 5, 2018: https://twitter.com/Mulboyne/status/1003908590837600256?ref_src=twsrc%5Etfw
 June 5, 2018: https://twitter.com/Mulboyne/status/1003912582627934208?ref_src=twsrc%5Etfw
 June 5, 2018: https://twitter.com/Mulboyne/status/1003912118595346432?ref_src=twsrc%5Etfw
 June 5, 2018: https://twitter.com/Mulboyne/status/1003913146749161472?ref_src=twsrc%5Etfw
 ity tranonkala ity: https://plaza.rakuten.co.jp/jamborg/diary/200905100000/
 Jolay 2018: http://m-78.jp/rb/
 andian-tantara manaraka: https://en.wikipedia.org/wiki/Ultraman_R/B